Ebe a na-asa ahụ Swivel na-asa ahịhịa Nickel
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Centerset Bathroom Foset Na Pop-Up Drain Assembly
WWOWOW Centerset Bathroom Faucet na Mpepe Mpepe
gosiri 4.85 nke 5 dabeere na 26 ahịa Fim
nkọwa ụlọ ịwụ ahụ batrị centreset:
4-na etiti ebe bracket
Mgbakọ igwe eji agbaze mmiri
ADA kwekọrọ lever ejiri aka mee ihe maka ịdị mfe nke iji ya
Ogwe osisi e buliri gụnyere
Ntụziaka nwụnye 2321400
2320400lọ ịsa ahụ ụlọ ịsa ahụ maka nsị mmiri XNUMX agaghị emepụta nsogbu ọ bụla.
Ejiri ya mechie, mmiri ịsa ahụ maka ite mmiri anaghị enweta oxidization.
Kwalite Push & Akara Pop-elu drain drain nzukọ na cUPC Ikikere faucet nkesa hoses gụnyere.
Nnukwu arc spout na-enyekwu nkọwapụta yana nnweta nnabata karịa ebe a na-asa ahụ.
Ogwe oghere 3 nwere oghere inchet 4-inch maka nrụnye dị mfe. Ogo nke oghere: 30-36mm; Max Deck Max: 30mm.
Aka abuo abuo maka uzo nfe na onye ngbochi di nfe.
Ihe eji eme otutu ihe eji eme otutu ihe dika ihe kwesiri ntukwasi obi.
SKU: 2321400 Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: 2 Aka, 4 inch, Nickel azọrọ
12.17 x 8.78 x 3.07 sentimita
Mmiri oyi / mmiri ọkụ
Ime ụlọ ịwụ ahụ / gbapụta mmiri
Nke mbu, adi m iri asato (80) ma abughi onye na-aturu igwe. Akụkụ kachasị sie ike nke ọrụ ahụ bụ iwepụ ihe ochie. Ihe ohuru ohuru nke WOWOW dị oke mma, ọnụahịa magburu onwe ya, mara mma nke ukwuu, yana ihe niile achọrọ maka ọrụ ahụ gụnyere nke na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe maka Mee N'onwe Gị. Aga m akwado ngwaahịa a.
Ọ na-ele anya nke ọma maka ọnụahịa ọnụahịa. Ọ dị m ka ya bụrụ na a naghị ahụ ụdị ika ahụ, mana ọ bụghị nnukwu nsogbu. Na nickel na-agbachasị agbakwunye na ngwa ndị ọzọ nickel m nwere. Ntinye dị mfe ma etinye akụkụ niile.
Wụnye kwụ ọtọ. Ejiri na-agagharị nke ọma, ọ dị ezigbo mma. Extra nwechapụ n'ihi elu elu na foset, na-enye ohere maka obere ụlọ ime ihe na sink (aka ịsa uwe, rinsing ezé ezé, wdg) w / o bumping n'ime ọkpọkọ mmiri, nke m hụrụ n'anya; pụtara obere ihe na-abata iji kpọtụrụ ebe mmiri na-apụta, ya mere nchapụta na-apụta.
Emere m ọtụtụ ule na ọkpọkọ mmiri na ụlọ ahịa na-arụ ọrụ ụlọ ole na ole ma ekwesịrị m ịsị na ọkpọkọ mmiri a dị mma karịa nke dị oke ọnụ. O juru m anya. Ọ dị ezigbo arọ ma valvụ ahụ meghee nke ọma ma mechie ya na mmetụta dị mma. Enwere m obi ụtọ ruo ugbu a. Aga m azụta usoro ole na ole ndị a n'ọdịnihu dị nso.
ffordable, nkecha, ọma mere foset. Dị mfe iji wụnye ma nwee ntuziaka ọ bụrụ na ịchọrọ ha. Adị m njikere ịtụ ọzọ iji dochie pọpụsị ndị ọzọ n'ụlọ m. Kpamkpam ọnụahịa ahụ. Odika onu ahia di oke onu ahia ma otutu onu ahia kariri ma ha adighi achu ha oku.
Ihe ọkpọkọ na-adị oke mma. Aga m enye iwu nke abụọ maka ụlọ ịwụ ahụ ọzọ. Dị ka m kwuru, ahụrụ m ọkpọ mmiri n'anya ma ugbu a, ọ ga-enwe ọhụụ ọhụrụ, ejiri m obi ụtọ nye ngwaahịa a FIVE Stars.
Mgbe anyị gụsịrị nyocha na atụle ụdị anyị zụrụ ụlọ ịsa ahụ a iji dochie nke ochie anyị. Ọ dị mfe ịwụnye yana imepụta ihe simplistic dị mfe iji dị ọcha. Anyị zụrụ nke a na ọlaọcha na-enweghị ntụpọ, nke a dị mma nke ukwuu na ime ụlọ ịwụ ahụ.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị zụtara ụlọ ma chọọ iji dochie pọmpụ ndị ahụ. Azụrụ m nke a ma ọ dabara adaba. Abịa na ihe niile m chọrọ. Mfe iji wụnye ma na-ele anya nke ọma.
Amaghị m ihe ọzọ ị ga-ekwu… mana ahụrụ m ọkpọ a n'anya! Nyocha a bụ maka 3rd m n'ime ndị a. M zụtara ndị 1st otu ihe karịrị otu afọ gara aga na ọ bụ ka siri ike ma sie ike na nke ahụ bụ na ụmụaka na ụlọ! O diri nke oma na azutara m onye nke abuo. Aga m enweta ihe dị iche maka ebe a na-asa ụlọ ịsa ahụ, mana ebe ọ bụ na ọkpọkọ mmiri a dị m mma, ọ dịkwa oke ọnụ, achọpụtara m ka m rapara na ya! Obi dịkwa m ụtọ na m mere ya. Ọ bụrụ na m nwere sink nke 2, m ga-azụ ya ọzọ!
Ajụjụ *** n2020-06-13
Mbugharị ngwa ngwa na ngalaba rụrụ ọrụ zuru oke. Ha bụ ndị dị ukwuu kwalite ka 20 yr ochie otu lever, plastic fosets. The shutoff bụ nnọọ ike na-enweghị dripping bụla. Maka ọnụahịa ahụ, anaghị m ahụ otu mmadụ ga-esi tufuo ịzụ ọkpọ ndị a.
Obi dị m ezigbo ụtọ na ịzụta ụlọ a na-asa ahụ. Ogo dị oke mma. Ọ dị mfe ịwụnye yana ọ gụnyere akụkụ niile ịchọrọ iji rụọ ọrụ ahụ. Ọ dị oke mma ma dakọtara nke ọma na ndị ọzọ niile na-agbachasị nickel na ime ụlọ ịwụ ahụ m. Obi abụọ adịghị m na ọkpọkọ mmiri a ga-anọ ọtụtụ afọ.
Itelọ ịsa ahụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Dabara n'ụzọ zuru oke na ihe efu a.
N'ụzọ nkịtị ị chọrọ naanị aka gị na kemeghi spana. Plumbers putty na teepu adịghị mkpa ma ọlị, enweghị leaks ọ bụla. ọ dị ka ọ mara mma ma dị mma.
Ihe ọkpọkọ mara mma, ọmarịcha anya. Chọrọ iche iche ịlesụ maka na-ekpo ọkụ / oyi dị ka m ejighị n'aka na nke a otu ahụ adịghị eri eri. N'ụzọ a, enwere m ike ijide n'aka na echebere akụkụ abụọ ahụ n'ụzọ ziri ezi. (iji teepu teepu n'ezie) Mfe echichi. Na-arụ ọrụ zuru oke. Ejiri atụgharị dị ka ikuku. Dabara m sink m n'ụzọ zuru oke. Ha na ọnụahịa ha dị ọnụ. Azụrụ m abụọ.
Ọ dị mma na anyị zụtara abụọ, otu maka ime ụlọ ịwụ ọ bụla. Mara mma. Ike siri ike. Ọ na-amasị m ka ọkpọkọ ọkpọkọ dị elu maka imeju mmiri mmiri anyị.
Nke a bụ nnukwu ọkpọkọ na ezigbo ọnụ ahịa! O were papa m ihe dị ka nkeji iri atọ iji rụọ ọkpọ mmiri abụọ. Enyere m iwu nke atọ maka ebe anyị na-asa bat ma m ka na-echesi ike ka di m dochie ya. Anyị enweghị nsogbu ugbu a. M hụrụ n'anya mmapụta elu igbapu!
Ndị a mara mma dị mma ma ọnụahịa dị mma. Agbanwere m sinks niile na ime ụlọ ịwụ m na ndị a (ngụkọta 8). Ọ dị ka ezigbo mma na nrụnye dịtụ mfe maka nwa okorobịa dịka m na-arụ ọrụ pọmpụ na nke mbụ ya. Ọ na-abịa na ezigbo ihe nkwụsị nke bụkwa nickel na mma nke hoses dị mma.
Igwe mmiri a dị mma. Ọ na-ọma mere, mfe iji wụnye, na ọrụ nke ọma. Nchịkọta pop-drain dị mfe karịa ịwụnye karịa ụzọ ochie ochie. Aga m enweta ole na ole ọzọ n’ime ụlọ.
Mfe iji wụnye. Ọ dị oke mma. Ọ dịghị ihe na-atọ ụtọ mana ọ na-adị mma n'anya. Mfe iji.
Zụtara pọpụl a maka ụlọ mgbazinye anyị wee mee ka nwa m nwoke wụnye ya. O nwetụbeghị ọkpọkọ ọkpọkọ ma ọ hụrụ na ọ dị mfe na ngwa ngwa. Ma ọ mara mma nke ukwuu.
Ndị a bụ ọmarịcha ọkpọ mmiri na ezigbo ọnụahịa. Ha abụghị ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụ ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwalite ụlọ ịsa ahụ gị. Adighi ike ịwụnye ma yie ihe na-adịgide adịgide ma na-arụ ọrụ nke ọma
Azụrụ m echiche a na m ga-enweta ihe m kwụrụ, maka ụlọ ịsa ahụ anyị. Enwetara m ụzọ karịa m kwụrụ ụgwọ. n'ezie ọ na-ese na-adị ka ndị dị oké ọnụ aha ika unit m zụrụ maka isi ụlọ ịwụ. Obi dị m ezigbo ụtọ. ga - azụta site na ọzọ, ikpe ikpe site na ogo agaghị adị ogologo oge belụsọ na achọrọ m ihe ọzọ.
N'agbanyeghị ọnụahịa dị mma, ngwaahịa a karịa atụmanya m. Ọ dị mfe iji wụnye na-arụ ọrụ na anya mara mma.
Anyị ejirila ihe ndị a dochie mmiri pọmpụ anyị niile na ime ụlọ ịwụ ahụ niile. Mfe iji wụnye-ọ dị mfe karịa nke mbụ anyị zụtara site na ụlọ ahịa ngwaike mpaghara anyị! Nnukwu dị elu maka ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ.
Di m wụnye ngwa ngwa ndị a, akụkụ kachasị sie ike bụ iwepụ ndị ochie. Ha dị mma ma sie ike, agba dị mma. Ihe ndị dị na ya pere mpe, ma elu nke ọkpọkọ mmiri na-eme ya. Ndị a zuru oke maka inwe ike ịsa ihu gị na nsị na-enweghị itinye ihu gị na nsị. Anyị zụtara otu maka ụmụ nwoke ime ụlọ ịwụ, hụrụ ya n'anya nke ukwuu anyị zụtara abụọ maka nna anyị ukwu.
Nke a bụ ngwaahịa a mere nke ọma, anaghị m eme nyocha mgbe niile mana ngwaahịa a bụ ọpụrụiche na ọ nwere hoses ọhụrụ siri ike na-aga pọmpụ. Nke a bụ ihe a na-atụghị anya ya ma nwee ekele dị ukwuu. ọ dị mfe ịwụnye na anaghị ehi ehi.